डाक्टरले भने, फलाम नछुनोस्, १२ घण्टासम्म कोरोना जीवित रहन्छ ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/डाक्टरले भने, फलाम नछुनोस्, १२ घण्टासम्म कोरोना जीवित रहन्छ !
डाक्टरले भने, फलाम नछुनोस्, १२ घण्टासम्म कोरोना जीवित रहन्छ !
काेरोना भाइरस (कोभिड १९)को संक्रमण चीनको वुहान हुँदै अहिले विश्वभरि नै फैलिसकेको छ। काेराेना जनावरबाट मानिसमा र पर्याप्त जानकारीको अभावमा विश्वभरि फैलिएकाे हाे।
यो भाइरसको पहिचान सन् २०१९ को अन्तिम दिन भएको थियो। अहिलेसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट विश्वभर ३ हजार बढी मानिसहरुकाे ज्यान गइसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्व स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरिसकेको छ।
यहाँ कोरोनाको बारेमा विभिन्न प्रश्न र तिनका समाधानको बारेमा चर्चा गरिएको छ।
कोरोना भाइरसले स्तनधारी जनावर तथा चराचुरुङ्गीहरूमा रोग निम्त्याउने गर्दछ। मानिसहरूमा यसले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग निम्त्याउने गर्दछ जुन प्रा’णघा’तक पनि हुन सक्छ। हालसम्म यसको विरुद्ध कुनै खोप वा औ’ष’धिको आविस्कार भएको छैन।
कोरोना भाइरस समुद्री खानाबाट मानिसमा सर्ने एक प्रकारको भाइरस हो। यस भाइरसको स’ङ्क्र’मणबाट सन् २०२० जनवरी ५ मा चीनमा पहिलो व्यक्तिको निधन भएको थियो। अहिले यो भाइरस चीनबाट विभिन्न देशहरूमा फैलिरहेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना भाइरस‚ विभिन्न भाइरसहरूको समूह हो। यो भाइरस सुरु-सुरुमा सामान्य रुघा खोकीबाट सुरु भई पछि ज्या’नै लिने किसिमको हुन्छ। यो भाइरस मानिस र जनावरमा दुवैमा देखिन सक्छ।
विश्वव्यापी रुपमा सं’क्र’मण हुँदे गएको कोरोना भाइसर सबैभन्दा बढी समय फलाममा जीवित रहन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन् । अन्य वस्तुमा भन्दा फलाममा १२ घण्टासम्म कोरोना भाइरस जीवित रह्ने इन्टरनल मेडिशिन रेसिडेन्ट डा. मिलन बज्राचार्यले जानकारी दिए । यदि कुनै रोगीले फलाम छोएको रहेछ भाइरस हतपत्त मर्दैन, लामो समयसम्म जीवित रहिरहन्छ ।
यसका विभिन्न लक्षणहरूका बारेमा बाहिर आइरहेका बेला अझ नयाँ-नयाँ लक्षणहरू देखापरिरहेका छन्। ‘हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले ब्याक्टेरियासँग कसरी जुधिरहेको छ भन्ने कुराले यसको जोखिम निर्धारण हुन्छ’, टोरोन्टो विश्वविद्यालयका सरुवा रोग विशेषज्ञ अलिसन म्याकगियरले भने।
‘शारीरिक दुखाइ आदिले गर्दा अप्ठ्यारो महशुस भएको छैन‚’ उनले भने‚ ‘म राम्रैसँग सास फेरिरहेको छु‚ नाकमा सिँगान जम्ने किसिमका कुनै लक्षण देखिएको छैन। बरु छाती कस्सिएको महशुस भएको छ‚ खोकी लागेको छ। यदि मलाई यही रोग घरमा बस्दा लागेको भए‚ म नियमित काममा जानेथिएँ।’
विश्वकै पहिलो कोरोनाविरुद्धको ‘भ्याक्सीन’ बनाएपछि रुसलाई आउन थाल्यो बधाईको ओहिरो
रूकुम घटनाका मृतकका परिवारलाई सरकारले १०–१० लाख दिने